नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : आमाको रगत चुस्ने राजनीति !
आमाको रगत चुस्ने राजनीति !
हरेक आँखाको आँसु पुछ्न सक्नु राजनीति हो, नेपालका सर्न्दर्भमा आफन्तबाहेकका सबैका आँखाबाट आँसु झार्नसक्नु राजनीति भएको छ । मान्छेका सबै चिज गुमे पनि भविष्य बाँकी छ भनेर आशामा उत्साह रोपेर खुशी फलाउन सकिन्छ, नेपालमा त भविष्यको जरा उखेल्ने काम भइरहेको छ । यसैलाई भनिन्छ, जुम्रा, उपियाँ र जुका राजनीति । आमाले दुध पिलाइन्, यी रगत चुस्ने राजनीति गर्छन् ।
मासिक सवा तीनहजार डलर तलव खान्छन्, भुटानका राजनीतिज्ञ तथा प्रधानमन्त्री डा.लोटे छिरिङ । तर उनी दिनको २ घण्टा अस्पताल जान्छन् र निशुल्क बिरामी जाँच्छन् । नेपालमा ८ वर्षराष्ट्रपति बनेका धनुषाका धनपति, जमिन्दार डा.रामवरण यादव अवकाशपछि पनि राज्यकोषबाट मासिक ८ लाख भत्ता लिएर पालिएका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति जनताको चिसो चुल्हो, भोको पेट, नाङ्गो शरीर देख्दिनन्, मन्त्री, सांसद पनि त्यता हर्ेर्दैनन्, तिनलाई बेलायती जिमखाना, जर्मनी कार्पेट, इण्डोनेसियाली फर्निचर, अमेरिकन वाथरुम चाहिएको छ । भाङ्ग्राको धोतीमाथि गुयँलाको फूल सिउरिने लङ्गडा सोख
१९५० मा जन्मेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, आर्टस विषयका थर्डक्लास ग्य्राजुयट हुन् तर उनले १ सय ३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा मात्र होइन, विश्वराजनीतिमा फस्टक्लास राजनेताको छवि बनाएर उच्चाशनमा छन् । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ सिङ्गुवा विश्वविद्यालया कानुन, सिद्धान्त र सुशासनका धुरन्धर विद्वान हुन् ।
देङवादी सीले बीआरआई मार्फ विश्वलाई जोड्ने सपना साकार पार्न अघि बढेका छन् । सी अगाडिका हु जिन्ताओ हाइड्रोलोजिष्ट थिए भने, जियाङ जमिन इलेक्टि्रक इन्जिनियर थिए । ९५ वर्षो आधुनिक मलेसियाका निर्माता डा.महाथिर महोम्मदले अहिले पनि र्सवसाधारणको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री आठपासे र दस पासे छन् । यिनीहरुको ठूलो ड्रि्री भनेकै ज्यानमारा मुद्दामा जेल बसेको अनुभव हो ।र्
वर्तमान नेपाली राजनीति देश र जनतालाई होइन, राजनीतिमा लागेकाहरुको जेरियाटि्रक्स ९न्भचष्बतचष्अक० बृद्ध हेरचाह गृह हो । यी बृद्धहरु किन नाना, छाना र खाना नपाएर मरिरहेका नेपालीतिर हर्ेर्दैनन् - के यी बृद्धहरु सत्ता र सम्पत्तिले काललाई किन्न सक्छन् -
मुलुक हतियारपछि मतियारको त्रासदीमा छ ।
नेपाली बृहद शब्दकोषका अनुसार 'त्रास उत्पन्न गराएर हिंसात्मक ब्रि्रोहका रुपमा प्रभुत्व स्थापना वा कार्यसिद्धि गर्ने विचार आतंकवाद हो ।' 'यस्तै सिद्धान्त वा विचारमा लागेको वा त्यसको अनुयायी आतंकवादी हो ।' यस अर्थमा नेपाल छिमेकीको, पश्चिमाको आतंकवादको सिकार भएको छ । तिनका विश्वासी बनेर काम गर्ने नेतृत्वपंक्ति आतंकवादी हुन् ।
अमेरिकाका पर्ूव राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरका सल्लाहकार ब्रेजनेस्कीको निष्कर्षछ- आतंकवाद कुनै न कुनै राजनीतिक द्वन्द्वबाट जन्मन्छ र हर्ुकन्छ । निरञ्जन उपाध्याय भन्छन्- जो कुनै प्रकारको आतंकमा लाग्छ, उसले आफ्नो क्षमता गुमाउँछ, ऊ त्यस्तो परिस्थितिमा फस्दै जान्छ, उसले स्वतन्त्रता र मुक्ति पाउन सक्दैन । अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रिचमण्डले थपेका छन्-'यिनीहरुमा बदलाको भावना हुन्छ ।' नेपाली राजनीतिमा बदलाको राजनीति चर्केको छ ।
बेलायतको दी टाइम्सका पर्ूव सम्पादक सर विलियम हेली भन्छन्- यस्ता खराव, निर्दयीहरुका बारेमा जतिसुकै राम्रो लेखनले पनि सुन्दर तुल्याउन सकिदैन ।
पञ्चायतमा भन्दा बहुदलकालमा र बहुदलपछि लोकतन्त्रकाल, खासगरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनले जे जति परिवर्तन ल्यायो, ठूला दलको कोठे सहमतिमा राष्टर््रधर्म र २०६३ साल वैशाख ११ गते कुनै प्रकारको राजतन्त्र राख्ने सहमति गरेर २०६५ सालमा चुनाव हारेका कांग्रेसी कृष्णप्रसाद सिटौलामार्फ प्रस्ताव गर्न लगाएर झुक्याएर नेपाल निर्माण गर्ने राजतन्त्रको श्रृङ्खला समाप्त पारियो । ती र त्यसपछिका निर्ण्र्ाारु इवि साध्ने तरिकाले भएका छन् । निरन्तर अमानवीय, अराष्ट्रिय, अलोकतान्त्रिक निर्ण्र्ाारु १४ वर्षछिसम्म पनि भइरहनु भनेको आतंक नै हो । जुम्रा, उपियाँ र जुका राजनीति आतंक राजनीति हो ।
१४ वर्षा शासक आलोपालो उही छन्, शासनको तरिका उही छ, आतंक र अन्यौलको बादल फाटेको छैन । फाट्यो त, पद्धत्रि्रति जनविश्वास फाटेको छ । च्यातियो त, जनप्रतिनिध्रि्रति भरोसा च्यातिएको छ । माटोको मुहारमा नैराश्यकता छाएको छ ।
हुनुपर्ने हरिश्चन्द्रझैं सत्यवादी, भीष्मझैं दृढनिश्चयी, दधिचिझैं दानी हो । लोकतन्त्र आउँदैमा नेतृत्वमा पुग्नेहरुको सोच सत्यवादी नहुनेरहेछ । स्वार्थ, इवि, लोभ, बोकेर हिड्नु भनेको सालाहरु किचकको बर्ुइ चढेर राजा विराट र्स्वर्ग हिँडेजस्तै हो । स्वार्थ सिद्ध हुनसक्ने भए भीमसेनले किचक बध किन गर्नुपथ्र्यो ।
पढ्नुपर्ने वीर बलभद्र, अमरसिंह, भीमसेन थापाहरु, बुझ्नुपर्ने नेपालका भीमदत्त पन्त, भारतका गुलजारीलाल नन्दा, डा.भीमराव अम्बेडकर थियो, जसले देश बचाए, जनता जगाए, मानवता जगाए । हामीसँग नेता छन, राजनीति छ, माटो छ, तर नेतृत्वमा रहने र तिनका वरिपरिका बाहेक सिङ्गो मुलुकमा बसोबास गर्ने १२६ जातिको सामुहिक रक्षा हुनसकेन ।
लोकतन्त्रमा १७३१ माजस्तो देवीदास चिकुटीहरुको उदय भएको छ । देवीदास तिनै व्यक्ति हुन्, जसले श्रीनिवास मल्लका पालामा चौतारिया -प्रधानमन्त्री) भएका थिए । उनले आफ्नो अलोकप्रियता छोप्न आफ्ना प्रशंसकहरुलाई सफल शासक भन्ने अभिलेख लेख्न लगाएर प्रचार गरेका थिए ।
व्यवसाय बनेको राजनीति र लुटतन्त्र बनेको लोकतन्त्र सफल छ भन्नु चिकुटीको आत्मप्रचारजस्तै हो, जुन भइरहेको छ ।
यो लोकतन्त्र इतिहासप्रति घृणा गर्ने लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र हाँक्नेहरु तैँले नभए तेरा बाजे, बराजुले गल्ती गर्‍यो होला भन्ने् नीतिकथाजस्तो बिगतलाई गाली गरेर थाक्दै थाक्दैनन् । नीतिकथा छ- एउटा सानो पाठो खोलामा पानी खान गयो । फ्याउरोलाई पाठो खाने इच्छा जाग्यो । उसले नजिकै गएर भन्यो- पानी किन धमिल्याइस् - पाठोले म सानो पाठो, खोलो कसरी धमिल्याउन सक्छु - फ्याउरोले पोहोर पनि तैंले मलाई मनपरी भनेको थिइस् नि भन्यो । पाठोले भन्यो- पोहोर त म जन्मेकै थिइन । तैँले नभए तरो बाबु बराजुले गाली गरेका थिए भनेर पाठोको घाँटी टोकेर मार्‍यो, खायो । हाम्रो लोकतन्त्रले हिन्दुराष्ट्र, राजतन्त्र र हाम्रा खुसी र सुखका अपेक्षाहरु यसैगरी खाइरहेको छ । नेपाल निर्माताको ऐतिहासिक सालिक फुटाउँदै जातीय सालिक ठड्याउँदै गएको छ ।
१९७५ मा एड्स रोग आयो र झण्डै ३ करोडको सिकार गर्‍यो । प्लेग र हैजा एउटै समयमा महामारी बनेको हो, हैजाले पनि ५० लाख मान्छे चपायो । सन १९१८ मा अमेरिकाबाट स्पानिस फ्लू महामारी फैलियो । यो महामारी झण्डै ७५ हजार मान्छेको काल बन्यो । सन १९६८ मा हङकङ फ्लूले विश्वका साँढे २ करोड मान्छे मारेपछि बल्ल रोकियो । अहिले चीनबाट फैलिएको भनिएको कोभिड-१९ भाइरसले भकाभक मान्छे मारिरहेको छ । औषधिका लागि विश्व लागिरहेको भए पनि पत्ता लागेको छैन । मानव सभ्यता नै समाप्त पार्ने तरिकाले बेला बेलामा यस्ता रोगहरु उब्जन्छन् । मान्छेले परास्त गरेका पनि छन् । कोभिड-१९ पनि परास्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
देश र मानवीयताका लागि गर्नेले ज्यानको बाजी पनि लगाउँछन् । सन १३४७ देखि ५१ सम्म फैलिएको प्लेग रोगले एसियादेखि अप्रिmका, युरोपसम्म झण्डै २० करोड मान्छे मार्‍यो । रोग पत्ता नलागेसम्म औषधि बन्ने कुरा आएन । डाक्टरसभाले भन्यो- प्लेग रोगले मरेको मान्छे चिरेर कारण पत्ता लगाउनु पर्ने भो - शव चिरेर अनुसन्धान गर्दा आफै मरिने भएपछि मर्न कोही तैयार भएनन् । हेन्नी गायन भन्ने एउटा युवा अगाडि सर्‍यो । र्सजरी गर्नु अघि आफ्ना सारा सम्पत्ति अस्पतालको नाममा दिने इच्छापत्र बनायो र शवको चिरफार गर्न थाल्यो । शव पोष्टमार्टम गर्दैगर्दा कागजमा लेख्दै पनि गयो । उसलाई प्लेगका किटाणुले आक्रमण गर्न थाले । ती युवा जाँच गर्दै गए, दबअतभचष्ब थ्भचकष्लष्ब उभकतष्क, ब शययलयतष्अ दबअतभचष्ब, गकगबििथ ायगलम ष्ल smबिि mammबकि बलम तजभष्च ाभिबक। लेख्दै गए । प्लेगको रोगको निदान लेखिसके, उनको मृत्यु पनि भयो । यसपछि प्लेगको ओखती बनेको हो ।
डाक्टरी यसरी समाजसेवा बन्यो । राजनीति त आफैमा समाजसेवा हो । तर नेपालका सर्न्दर्भमा व्यापार बन्यो । लोकका लागि, मानवीयताका लागि मर्न कोही तैयार छैन । आत्मसुख र आफन्त समृद्धिले राजनीतिलाई घमण्ड सागर बनाएको छ ।
प्रकृति सन्तलुनमा चलेको छ । जब आमाको गर्भमा बच्चा रहन्छ, त्यतिबेला सानो यौनद्वार ९ महिनापछि बच्चा जन्मने बेलामा आफै फुक्छ, आफै खुल्छ र पछि आफ्नो आकारमा पुग्छ । बच्चा नजन्मदासम्म सामान्य दूधको मुन्टोबाट बच्चा जन्मनासाथ दूधको थोपा रसाउँछ । त्यो बच्चा जबसम्म आफै खान सक्दैन, तवसम्म आमाको छातीबाट दूधको मुहान बगिरहन्छ, बच्चाले अन्न खान थालेपछि आमाको दूध आफै सुक्छ । प्रकृतिको यो चमत्कारिक लीला प्राकृतिक सन्तुलनको बुझ्नै नसकिने गरिमा, महिमा र रहस्य हो । त्यसरी जन्मेको मान्छे, अहंकारी बनेर आफूभित्र जुम्रा पालेर आमारुपी नागरिक, देशलाई टोकिरहन्छ, आफूबाहिरका उपियाँ, जुकालाई बोलाइ बोलाइ आमारुपी माटो र जनतालाई चुसाइरहन्छ । आजका व्यापारी बन्दै गएका नेतृत्वमा आत्मसम्मान भन्ने नै बाँकी छैन । मानवीय संवेदन मरेपछि दर्ुइ खुट्टे मान्छे र चारखुट्टे पशुमा बुझिने र नबुझिने भाषाको मात्र भिन्नता बाँकी रहने हो ।
टम क्रुज भन्ने फिल्मकार अन्तरिक्षमा फिल्म सुटिङ गर्ने अभियानमा छन्, कतिपय धनाध्ये जोडीहरुले अन्तरिक्षमा विवाह र हनिमून मनाउन नाम लेखाइसकेका छन् । नेपाल बनाउने नेतृत्व दलाल बनेर दलाली खाने धन्दामा मगनमस्त छ । सत्ता र सम्पत्ति यिनका लागि र्स्वर्गकी परी र स्वर्गानन्द हो । यिनले चक्रवर्ती सम्राट अलेक्जेण्डर दी ग्रेट पढेकै छैनन् । उनले मनुृअघि आफ्ना दुबै खाली हात देखाएर चिहानमा लैजान भनेका थिए । यो घटनाको अर्थ मान्छेको जुनीको महाभारत हो ।
कोरोनाको महामारीबाट मरिन्छ कि बाँचिन्छ, कुनै ठेगान छैन । सत्तासीनहरु यस्तो अनिश्चित समयमा पनि कमिशनकै चक्करमा छन्, कमाउने मौका यही हो भनेर लागिरहेकै छन् । मान्छे बिरामी भयो, डाक्टरहरु भागम् भाग गर्छन् । जाँच्नै परे सकभर नछोइकन जाँच्छन् । मान्छे मर्छ अनि कोरोना टेस्ट गर्छन् । कोरोना पुष्टि गर्छन् । मरेको शव व्यवस्थापन गर्नसमेत सेना बोलाइन्छ । नेपालमा सेनालाई बाटोदेखि अस्पतालसम्म, स्कूलदेखि विश्वविद्यालयसम्मको जिम्मेवारी भिराइएको छ ।
वर्षो २ अर्व भन्सार छुट लिने अस्पतालहरु जनतालाई जाँच्दैनन् । बिरामी ढोकामा आउँदासमेत फर्काइदिन्छन् । गैरजिम्मेवारीको सीमा नाघिसक्दा पनि कसैमाथि कारवाही हुन्न, कारण कारवाही गर्नेहरुसँग उनीहरुको साँठगाँठ हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका पर्ूव न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की लेख्छन्- यो महाव्याधीमा कोरोनासम्बन्धी सबै परीक्षण राज्यले निःशुल्क रुपमा गराउनर्ुपर्छ । देशमा सरकारको उपस्थिति देखाउने हो भने क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन लगायत भेन्टिलेटरमा राखेर गर्नुपर्ने उपचार पनि निःशुल्क हुनर्ुपर्छ ।
माँग राम्रो हो, सामयिक हो । तर जिम्मेवारी कसैले लिदैनन् । नागरिकलाई उपचार छैन, नागरिक भोकभोकै छन् । लकडाउनमा छन् । अर्थमन्त्री राष्ट्रपतिलाई डेढ अर्वको हेलिकोप्टर, एक करोडको कार्पेट, १८ करोडको गाडी, मन्त्रीहरुलाई जिमखाना, स्वीमिङ पुललाई बजेट छुट्याउँछन् । अर्थात कमिशनको चक्कर छ जता पनि । दाल, भात, डुकु छैन कतै पनि ।
सैनिक जर्नेल कूलबहादुर खड्का, कुमार फुदुङहरु कमरेड हुने, कोमल ओली कम्युनिष्ट कोटाको सांसद बन्ने, दरवारको नुन चाट्ने सुवसेन माओवादी हुने, सत्तापक्ष, विपक्षका नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म राज्यकोष, राज्य सम्पत्तिको दोहनका साझेदार बन्ने देशमा नैतिकताको के कुरा गर्नु - अहिले बल्भिmएको कालापानी, लिम्पियाधुरा-लिपुलेकको समस्या माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि २०५२ सालमै र्सार्वजनिक गरेको हो । देशभक्ति त कांग्रेस, एमालेले पनि बगार्दै आएको हो । तर सीमा अतिक्रमणको समस्या दर्ुइ तिहाइको नेकपा र प्रतिपक्षी मिलेर पनि समाधान गर्न सकेका छैनन् ।
जासुसको काम दलाली खाने हो भन्दै एक बुद्धिजीवीले लेखेका छन्- जासुसको इतिहास लेखिदैन । हाम्रा राजनीतिमा लागेका जासुसहरुको इतिहास त लेखिएला तर कालो इतिहास लेखिनेछ ।